Insomnia, nke Daniel Martín Serrano dere. Nyocha | Akwụkwọ ugbu a
Mariola Diaz-Cano Arevalo | 07/10/2021 12:00 | Ndị edemede, Akwụkwọ, Black akwụkwọ, ọtụtụ
Insomnio bụ akwụkwọ akụkọ solo nke mbụ Daniel Martin Serrano, mana onye Madrilean a nwere ọtụtụ akụkọ ifo n'azụ ya na ọrụ afọ iri abụọ usoro edemede dị ka Hospitallọ Ọgwụ, Velvet, Onye isi o Oké osimiri. Ọ na -akụzi edemede telivishọn na ụlọ akwụkwọ ihe nkiri Madrid wee malite ugbu a na aha ụdị ojii a nke na -enweta ihe ịga nke ọma n'etiti ndị na -agụ ya na ndị nkatọ. NA maka m anọwo otu n'ime akwụkwọ afọ a. Nke a bụ nke m nyocha nke, ọ dabara nke ọma, enwere m ike ịkekọrịta ya na onye edemede n'oge ngosi akwụkwọ ngosi Madrid gara aga.
1 Insomnia - Nkọwa
1.2 Ugboro abụọ
1.4 A mana
1.5 Na nkenke
Insomnio - Nyochaa
Onye bụbu onye nyocha Tomás Abad na -arịa ọrịa ehighi ura adịghị ala ala na, karịa nke ahụ, karịrị akarị. Ma mgbe ị rutere na ibe ikpeazụ nke akwụkwọ akụkọ, gị onwe gị kwa na -eche na ike agwụla ya. Na mgbakwunye, ịkọ akụkọ ihe mere eme enyeghị gị ezumike, nke a bụ ogo nchekasị na ọchịchịrị onye na -ata ahụhụ maka oge ya na ihe gara aga ya ị na -ekele na enyemaka ezumike ha, Agbanyeghị.
Nke bụ eziokwu bụ na Tomás ọ na -aga nke ọma na uwe ojii, ọ bụ a ọkaibe ọkachamara ya na ndị otu na -arụ ọrụ nke ọma na gburugburu ya ndụ onwe onye Ọ rụkwara ọrụ, n'alụmdi na nwunye dị jụụ mana ya na nwa nwoke ọ na -ahụchaghị n'ihi ọrụ ahụ na -adọrọ mmasị. Ma nke ahụ ọrụ na-aghọ na -atụ egwu mgbe ha malitere ịpụta ahụ ndị na -eto eto gbaruru n'isi nke ga -agbakọ na mgbagwoju anya macabre.
Mgbe ahụ chọpụta na ọ dị onye nọ nso nye onye tinyere ọ dịkwa ka ikpe mara ya karịa. Nke ahụ ga -abụ mmejọ gị, n'ihi na mkpebi siri ike ihe ọ ga -ewe iji chebe ya ga -abụ ihe kpatara ya ịchụpụ, mmegide na ịjụ ọtụtụ ndị mmadụ. Site n'ebe ahụ gaa gbada na hel nke ehighị ụra nke ọma mepụtara, uta na itinyekwu uche mgbe, ugbu a, mgbe ị na -achọ ibi ndụ onye nche abalị na a na-adọba ụgbọala mgbe ahụ na oke ili de la Almudena, mmadụ ga -eme ka ị mata nke ahụ nrọ ọjọọ adịghị agwụ.
Otu n'ime akụ nke akwụkwọ akụkọ ahụ bụ ime ka anyị gabiga oge akụkọ abụọ nke egosiri na iji asụsụ eme ihe ugbu a - Maka oge a - na n'oge gara aga - Iji gwa anyị ihe merenụ na otu anyị siri ruo onyinye ahụ. Isi okwu bụ na otu akụkọ ahụ, ma ọ bụ ha abụọ, na -agbakọ n'otu oge tụrụ ya nke ọma na ọ na -egosi enweghị mgbagha ahia nke onye edemede dị ka onye na -enyo enyo. Ọ na -eme ya nke ọma na ọbụlagodi maka ndị na -agụ akwụkwọ anaghị enwe mmasị na akụkọ ugbu a, dị ka ọ dị m, ọ naghị asụ ngọngọ ma ọlị.
Ha na -enyekwa aka ezigbo mkparịta ụka na rosary nke mkpụrụedemede nke abụọ tan wuru nke ọma dị ka protagonist. Tomás ga -agbake ụfọdụ n'ime ha, ndị ga -anwa inyere ya aka, dị ka onye ibe ya ochie, ga -enwetakwa ndị enyi ọhụrụ. Mana onweghị onye ga -enwe ike igbochi ndụ ya ka ọ na -emikpuwanye, na -efunahụ ezinụlọ ya na ọ fọkwara obere isi.
Isi ihe ọzọ siri ike bụ ọnọdụ ya mere n'ikwekọ n'olu dara ụda, nke mmụọ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ abalị ọ bụla na a Madrid a na -akọwakarị ya na ọtụtụ ọchịchịrị. Na mgbakwunye, ebe a na -adọba ụgbọala na ntọala ili ozu na -akwalite nke a mmetụta nke emeghị eme nke Abad nwere. Ọ chọrọ naanị idozi ikpe ahụ wee hie ụra, n'ihi na o nwere ihe ga -ezuru ya iji kpuchie mmehie dị ukwuu nke na -emekpa ya ahụ na -ata ụra nke ọma.
Agbanyeghị maka itinye ya na onye ikwu ma ọ bụ, opekata mpe, nke m, ka anyị kwuo site na ndabara ọkachamara dị ka onye na -agụgharị akwụkwọ mbụ wee bụrụ onye na -agụ: paragraf dị ogologo, ọtụtụ na ibe. Mana ihe ekwuru, akụkọ akụkọ na -aga nke ọma nke na ha na -agbaghara ibe ha.
Na Daniel Martín Serrano enwebeghị ike ime ka mpụta mbụ ya ka mma na akụkọ, na -esite n'ụdị dị iche, na -agbanwe agbanwe na ụdị ozugbo edemede ahụ dị. Ezi akụkọ, ezigbo usoro na njedebe ka akwụkwọ canons na -ekwu na nke ahụ na -ahapụ gị ụtọ ahụ nke a na -enwekarị ekele na ụdị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » ọtụtụ » Insomnia, nke Daniel Martín Serrano dere. Nyochaa